ဟောငျး Rhinebeck Aerodrome DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
ဟောငျး Rhinebeck Aerodrome FSX & P3D
အရွယ် 349 ကို MB
downloads ရယူရန္7460
Author: ရွှေခေတ် Simulator & Ed ကဝဲလ်
ဟောငျး Rhinebeck Aerodrome ကမ္ဘာစစ်ငါနှင့်ရွှေခေတ်လေယာဉ်ပျံများနှင့်အနီရောင် Hook, နယူးယောက်, USA တွင်တည်ရှိပြီးကြောင်းရှေးဟောင်းမော်တော်ကားတစ်ဦးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူတဦးကဝက်ဘ်ဆိုက်: www.oldrhinebeck.org.
အဆိုပြုထားသောရှုခင်း photoreal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ရှိသမျှရုံများတည်ဆောက်အပေါင်းတို့, အဆောက်အဦးများ, ထိုကဲ့သို့သော 1929 နယူးနျ Standard biplane D-25 AI အနေဖြင့်မောင်းနှင်သောအပါအဝင် site ပေါ်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ဟောင်းလေယာဉ်အဖြစ်အားလုံးအထင်ကရတ္ထုများပါဝင်သည်။ ဒီရှုခင်း၏အရည်အသွေးအဆင့် Orbx ထုတ်ကုန်၏ညီမျှ၏! စပျစ်သီးကိုလေယာဉ်၏ပရိသတ်များသည်အသင်အမှန်တကယ်ကအသေးစိတ်သွားရောက်anice ရာအရပျရဲ့, ဒါပေမယ့်မသာ, ဤအရပ်၌သင်၏လေကြောင်းပြပွဲတွင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်လက်စွဲကိုဖတ်ပါ။
ရှိရ code ကိုအသုံးပွုဖို့ NY94 လယ်ပြင်လေဆိပ် ID တွင်။
စစ်မှန်သောပြတိုက်၏ video, သင်ရှုခင်းနီးပါးတူညီကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မည်! ဒါကြောင့်လှပတဲ့အလုပ်။